Ny olona rehetra no efa nandre izany lehilahy iray izay natao am-bifotsy satria tamin'ny match.com nandritra ny asa. Tokony tsy ho eo amin'ny tranonkala, raha mampiaraka ianao miasa. Afaka manome ny heviny hoe tsy miraharaha momba ny any, na mba tsy te-Ireto misy soso-kevitra izay hanampy anao hitandrina ny orona madio sy hijanona amin'ny fahoriana, rehefa miaraka ianareo olona an-tserasera ary te-mbola ho afaka hanao tsara any am-piasana.
Ianao ho lavo ao ambadiky ny asa
Hanombohana, foana ianao te-ho ara-potoana. Ny antony iray dia afaka hahazo voaroaka noho ny mampiaraka amin'ny aterineto tsy voatery manao aminareo hoe amin'ny aterineto any am-piasana mijery ny Inbox. Raha te-hijanona amin'ny fahoriana, jereo ny hafatra ao amin'ny sakafo antoandro ny fiatoana, na rehefa any an-trano. Aza tara ny asa.
Ny lehibeny dia mihevitra anao mandany fotoana eo amin'ny aterineto
Ny zavatra iray hafa izay mety hiafara nahazo voaroaka noho ny Internet ianao no mijery ny mampiaraka tranonkala Inbox mampiaraka any am-piasana. Ianao mba miasa, tsy mba ho fanamarinana amin'ny fiainana ara-tsosialy. Nanamarina ny zava-dehibe Inbox, fa ianao no te hanao izany ianao rehefa eo ny fiatoana, na ny fotoana hafa fa tsy mila miasa. Raha tsy izany, ny lehibeny afaka mihevitra fa ny fandaniam-potoana ianao eo amin'ny aterineto, ary dia hiafara mitifitra anao sy fandraisana mpiasa avokoa ny olona izay “Tsy eo amin'ny aterineto ny fotoana rehetra.”
Ianao toy ny hoe mijery ianao nanafina zavatra
Tokony ho mailo foana koa ny fomba fitondran-tena no nahalala ny. Raha toa ianao ka manao zavatra Mahagaga miezaka ny hanafina zavatra ny amin'ny toeram-piasana, ny lehibeny dia miahiahy avy hatrany zavatra, ary avy eo dia hitandrina ny maso akaiky kokoa anao. Slip-tsotra iray ka BAM, lasa ianao.
Tsy ianao malefaka ampy
Ny hoe hentitra loatra no zava-dehibe iray hafa anisan'ny mampiaraka an-tserasera sy ny raharaham-barotra manana ny fiainana. Mety ho voatery indray handamina ny fandaharam-potoananao somary, fa raha ny tena lehibeny mila zavatra nanaovanareo, manokana fotoana ho azy.
Tsy mifantoka amin'ny asa
Tokony handinika ny koa ny ezaka fametrahana ianao. Rehefa mieritreritra ny dia izay hotafinareo izany daty mafana ianao androany hariva, ianao tsy mifantoka amin'ny asa, fa tsy fanaovana amin'ny mety ho vitany.
Ianao badmouth ny mpampiasa aterineto
Koa, tokony tsy badmouth ny orinasa, na dia ny an-tserasera daty. Raha toa ka hita avy ny orinasa momba izany, dia mety hitarika ho amin'ny ny fandroahana avy amin'ny asa, ary tsy misy olona te fa. Ataovy elektronika rehetra momba ny toeram-piasana tsara.
Ianao diso hifangaro amin'ny karazana ny olona
Farany, tokony hiezaka amin'ny ankapobeny fotsiny ny hijanona amin'ny fahoriana. Ny ratsy tsy mifanerasera amin'ny karazam-olona afaka mitarika ho anao hatao voaroaka. Ireo soso-kevitra manaraka dia hahatonga anao hahomby eo amin'ny roa ny tantaram-pitiavana sy ny matihanina ny fiainana.